बिज्ञान र प्रविधिको युगसँगै अनेकौँ आविष्कारहरु भैरहेका छन् । हरेक अनुसन्धान होस् या आविष्कार कहिले अमेरिकाको वैज्ञानिक त कहिले जापानको अनुसारकर्ता भनेर सुनिन्छ।
तर नेपालीको अनुसारकर्ता भन्ने बारे का धेरै मानिसहरू अनविज्ञ छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजीएको कुरा नेपालका पहिलो युवा वैज्ञानिक जनरल गेहेन्द्र शमशेरका केही रोचक तथ्यहरु ~
बि.सं.1928 पुसमा भारतको कोलकक्तामा जन्मीएका गेहेन्द्र शमशेर नेपाली शाहीसेनाका जर्नेल थिए। तत्कालीन राणाकालको तेश्रो प्रधानमन्त्री माहाराजा वीर शमशेर जबरा का छोरा थिए गहेन्द्र। उनलाई आधिकारिक रुपमै नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ।
घरमै अङ्ग्रेजी प्रशिक्षकसँग केही कुरा सिकेका गेहेन्द्रले नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा पढ्न थाले।त्यहाँ पढ्ने क्रममा उनको
रचनात्मकता बोल्ने कला अनि गीत सङ्गीतमा रुचि अनि खेलकुदमा रुचि देखेर सबैजना छक्क पर्थे।
दुनियाका नामि वैज्ञानिकहरु जस्तै उनले पनि अरुको कामको प्रशंसा गर्नेभन्दा बढि आफैंले नयाँ र नवीन कुराहरुको रचना गर्ने गर्थे।
बि.सं.1942 मा उनका पिता प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई सानै उमेरमा नेपाली सेानाको हातहतियारको मुखिया बनाईदिएका थिए जसले गर्दा सुनौलो अवसर चाख्न पाए।
उनल यश अवसरको सही सदुपयोग गरि नेपालीको हातहतियारको क्षेत्रमा थुप्रै योगदान दिए। उनले सेनाहरुको लागि चाहीने सर सामान तथा हात हतियारहरुलाई विदेशबाट आयात गर्नुको सट्टा यहिको श्रोतलाई प्रयोग गरेर यहीँ नै निर्माण गर्ने गर्थे।
उनले त्यतीबेला पनि जमल सुन्दरीजल बालाजु तथा भोजपुरको मेघचन भन्ने ठाउहरुमा नेपालकै पहिलो लघु जलविद्युत पानिघट्टाबाट चल्ने चामल कुट्ने मिल हावाबाट चल्ने पानी तान्ने मोटर जस्ता थुप्रै आविष्कारहरु गरेका थिए।
बि.सं. 1965 मा ब्रिटेनबाट फोड् कम्पनीको कार आयात गरेर त्यसको हरेक पार्टपुर्जाको अध्ययन गरे आफैले बनाउनको लागि।
उनले त्यस कारको पुरै पार्टपुर्जा फुकाले र फेरि फेरि जस्ताको तस्तै गरेर जोडिदिए। साथै उनले आफ्नै कार पनि बनाएका थिए। उनले त्यो कार तत्कालीन राजा पृथ्वी बीरबिक्रम शाहदेवलाई उपहार दिएका थिए।
त्यतिबेला नेपालका सेनाहरुले 1 नाल राईफल मात्रै चलाउथे। तर उनले2नाले राईफलको आविष्कार गरे र त्यसलाई गे राईफल गेहेन्द्र को गे नाम दिए।
फेरि उनले2नाले बन्दुकको आविष्कार गरे र त्यसलाई आफ्ना पिताको नामबाट वीर बन्दुक नाम दिए।त्यति मात्रै कहाँ हो र उनले फेरि नयाँ मोडेलको तोपको आविष्कार गरे र त्यसलाई आफ्ना हजुरबुवा धिर शमशेर को नामबाट धीर तोप नाम दिए।
1963 को दशैको अवसरमा आफुले निर्माण गरेको पेस्तोल कोटको खल्तीमा राखेर चन्द्र शमशेरलाई देखाउन उनी सेतो दरबार गएका थिए। चन्द्र शमशेरलाई ज्यु गर्ने बेला निहुरिदा उनको खल्तीबाट उत्त पिस्तोल खसेको थियो।
यही कारण नै बि.सं. 1964 मा उनको रहस्यमय मृत्युु भएको विस्वाश गरिन्छ। गेहेन्द्र शमशेरको चर्चा परिचर्चाबाट जलेका चन्द्र शमशेरले नै उनको हत्या गरेको त्यतिबेला शङ्का गरिएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यसको रहस्य खुल्न सकेको छैन।
यसरी 35 बर्षको कलिलो उमेरमै मृत्युु भएको युवा वैज्ञानिकको आविष्कारहरुलाई छाउनिको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा संरक्षण गरेर राखिएको छ।